ဗောဓိ တရားအားထုတ်ပွားများမှု မိတ်ဆက်ဖော်ပြချက် - ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း
ဗောဓိ တရားအားထုတ်ပွားများမှု မိတ်ဆက်ဖော်ပြချက်
ဗောဓိတရားအားထုတ်မှုစခန်းကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် တရားပြ ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိက ဖွဲ့စည်းတည် ထောင် ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မစ်ရှင်လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရူပက္ခန္ဓာကိုယ်၏ စွမ်းအင် တိုးတက်စေရန် နည်းလမ်း တစ်ရပ်အဖြစ် လက်တွေ့ကျကျ ထိရောက်မှုရှိသည့် တရားအားထုတ်မှု နည်းစနစ်များ ဖြန့်ဝေပေးကမ်းနိုင်ရန်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ခွင်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှု များစွာဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်စေရန်အတွက် စိတ်ဝိညာဉ်ကို လှုံ့ဆော်ကွန့်မြူးရန်ဖြစ်သည်။
ဗောဓိတရားအားထုတ်စခန်းသည် ကရုဏာစာနာမှုတရားအပေါ် အခြေခံထားသည့် လမ်းညွှန်သွန်သင်ပြမှု များဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကံ ကံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု သဘောတရားကို နက်ရှိုင်းစွာ ယုံကြည်ထားပြီး သတ္တဝါများအပေါ် မေတ္တာတရားဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ကတိပြုပါသည်။ ဗောဓိ တရားအားထုတ်စခန်းတွင် သင်ကြားပြသသည့် အဓိက အနှစ်သာရ နည်းစနစ်မှာ မဟာဉာဏ်အလင်း ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားများ၏ လိုအပ်ချက် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတို့ကို ပြည့်မီစေရန် ဤသို့အားထုတ်ကျင့်ကြံမှုနှင့်အတူ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းမှုပွားများအားထုတ်ခြင်း၊ ဂါထာရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျား မှောက်ရှိခိုးခြင်း၊ စွမ်းအားဘဂွါ နှင့် ဉာဏ်ပညာအလင်း လှုံ့ဆော်နိုးကြားရေး ပွားများအားထုတ်မှု တို့ဖြင့် ဖြည့်စွက် သင်ကြားပြသပေးပါသည်။ ဗောဓိ တရားအားထုတ်စခန်းသည် လိင်၊ အသက်အရွယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ အလုပ်အကိုင် သို့မဟုတ် လူမျိုးတို့အပေါ်အခြေခံ၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများကို နရာဒေသ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားအားဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းလမ်းများသည် လေ့လာမှတ်သားရန် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ယနေ့ခေတ်ကာလ၏ အလုပ်မအားလပ်သူများအတွက် သင့်လျော်စေရန် ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ထူးခြားသည့် ရလဒ်များ ထွက်ပေါ် စေပါသည်။ .
ဗောဓိတရားအားထုတ်ကျင့်ကြံနည်းစနစ်များသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏စွမ်းအင်ကို လျင်မြန်စွာတိုးပွားစေပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ မူလသို့ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗောဓိကျင့်စဉ်များသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု၊ အာဟာရ ချို့တဲ့မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာ သည့် ဒုက္ခဝေဒနာနှင့်နာကျင်ခံစားရမှုများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ကြံနည်း များကို ကိုယ်စိတ်နှလုံး အလုံးစုံ ကျန်းမာချမ်းသာမှု အခြေအနေ ပန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးတို့ အတွက် အထူးသီးသန့် ဆေးဝါးကုသမှု ဖော်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုရန် နည်းလမ်းများဟု သိရှိထားကြပါသည်။ .
ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှုနောက်ကွယ်မှ စည်းမျဉ်းများကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် အကြင်သူသည် ကမ္ဘာ လောကတွင် ပိုမိုရှင်းလင်းသည့် အမြင်နှင့် လောကနိယာမသဘောတရားကို ပိုမိုနားလည်စေရန် ခွင့်ပြုပေးနေသည့် မိမိကိုယ်ကို အလေးအနက် ဆင်ခြင်သတိပြုမှု သုံးသပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်သတိပြုမှု မြင့်မားလာလျှင် အခက်အခဲ စိန်ခေါ်ချက်များဖြေရှင်းရာတွင်၊ မိသားစုတွင်း သဟဇာတ မျှတမှု ဖော်ဆောင်ထိန်းသိမ်းရာတွင်နှင့် အောင်မြင်သည့် အသက်မွေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သူအဖြစ် ကြိုးပမ်းရာတို့တွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ တရားပွားများအားထုတ်ခြင်းနှင့် စေတနာ သဒ္ဓါတရား ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမှတဆင့် အကြင်သူတို့သည် ကုသိုလ်တရား ပွားများလာပြီး ထိုမှတဆင့်တက်၍ နေ့စဉ်ဘဝဖြတ်သန်းမှုမှ လွတ်မြောက်ရာ မင်္ဂလာ အောင်နိမိတ်လမ်းကြောင်းအဖြစ် အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ .
ဗောဓိတရားအားထုတ်စခန်းသို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကောင်းမွန်သည့် လူနေမှုဘဝ၏ ကျန်းမာသုခတို့ကို တွေ့ကြုံရယူလိုက်ပါ။ သင်တို့အနေဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဗောဓိတရားအားထုတ်စခန်း များစွာတို့အနက် စခန်းတစ်ခုသို့ သွားရောက်ပြီး လေ့လာကျင့်ကြံမှု စတင်စေရန်နွေးထွေးပျူငှာ ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဖိတ်ခေါ် ကြိုဆိုအပ်ပါသည်။.
က Short ရုပျရှငျပှဲတျောဗောဓိတှေးတောဆငခြှမိတျဆကျခွငျး – <a အံ့သွဖှယျအသကျတာ Here> စတငျ
Next：ဗောဓိ နည်းနာဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ် မိတ်ဆက်